सुशील नेपाल - साप्ताहिक
सुशील नेपाल का लेखहरु
सुशील नेपाल , कार्तिक ६, २०७४
शेरे : (अचम्म मान्दै) किन ? के भा’ छ र मलाई ? केही त भा’ छैन । बूढी : बाहिर टोलमा मानिसहरू ‘कुनचाहि जँड्याहा मर्न नसकेको कात्तिके कुकुर रक्सी धोकेर त्याँ गुको ढलभित्र लडिराखेको छ भन्दै हल्ला गरिरहेका थिए नि त, त्यसैले ।शेरे सेन्टिफ्ल्याट ।
एकै पटक अँगालो हालेर किस गर्‍यो
सुशील नेपाल , आश्विन ११, २०७४
घरमा बूढाबूढी आपसमा कुरा गर्दैबूढो : ए बूढी, यो छोरीको ठाउँमा छोरा जन्मिएको भए कत्ति राम्रो हुन्थ्यो ?बूढी : भयो राम्रो । तिम्रो भर परेको भए त यै छोरी पनि नहुने ।बूढो त्यहीं बेहोस ।